‪#‎OromoProtests‬ Namni kun GETACHEW MEMBERE jedhama. Bakka agartanitti qabamee adabamuu qaba.. -
‪#‎OromoProtests‬ Namni kun GETACHEW MEMBERE jedhama. Bakka agartanitti qabamee adabamuu qaba..
Kan intala Oromoo Sabriinaa Abdallaa kaleessa galgala Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti rasaasaan dhahee ajjeeseedha. Dhaloonni isaa Harargee Lixaa magaalaa Hirnaati.Namni kun daa’ima kichuu tana bifa suukanneessaan erga ajjeesee boodas kunoo naasuu takka malee miidiyaarra bahee of jajaa jira. Kanaaf bakka argametti adabbii seeraa isaan malu argachuu qaba.
Previous ‪#‎OromoProtests‬ Students and residents in Shashemene march through the city demanding and end to the ongoing night time murder spree in the town.
Next ‪#‎OromoProtests‬ Ethiopia regimes secret killing Oromo people every evening in Arsi people say killing enough is